Kedu ka agba si emetụta mmetụta ịzụta? | Martech Zone
Kedu ka agba si emetụta mmetụta ịzụta?
Wednesday, September 1, 2010 Tọzdee, Machị 18, 2021 Douglas Karr
Sayensị nke agba na-adọrọ mmasị, n'echiche m. Nnukwu ndị na - emepụta - ma ha bụ ụgbọ ala, ndị na - achọ ụlọ, ndị na - ese ihe osise, ma ọ bụdị ndị na - emepe ihu ọrụ na - aghọta ịdị mgbagwoju anya nke agba na mkpa ha dị. Site na palette agba ahọpụtara iji hụ na ọ na-enye nkwekọ - na agba ndị a na-etinye n'ọrụ - nwere mmetụta dị ukwuu na omume onye ọrụ.
Mụtakwuo Banyere Agba na Palettes Agba
Agba enwekwu ude site na 80%, na-eduga ozugbo na nkwenye ndị ahịa. Nke a bụ otu agba si emetụta ndị ahịa America:
Yellow - nwee nchekwube na ntorobịa, na-ejikarị ndị na-azụ windo eme ihe.
Red - ike, na -emepụta ịdị ngwa, na-abawanye ọnụego obi, ma na-ejikarị ya eme ihe na mkpochapụ ahịa.
Blue - na-emepụta mmetụta nke ntụkwasị obi na nchekwa. A na-ahụkarị agba ọchịchịrị na ụlọ akụ na azụmaahịa (dịka ụdị m).
Green - jikọtara ya na akụ na ụba. Agba kachasị mfe maka anya ịhazi ya ka eji ya na ụlọ ahịa iji zuru ike.
Orange - keesemokwu. Nke a na - emepụta oku ime ihe iji debanye aha, zụta ma ọ bụ ree.
Pink - ihunanya na nke nwanyị, nke a na-eji ere ngwaahịa na ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ.
Black - ike na sleek. Eji ya n'ahịa dị oke ọnụ.
Purple - eji mee ka obi dajụọ ma dị jụụ, a na-ahụkarị ya na mma na ngwaahịa na-egbochi ịka nká.
Maka ndị na-ere ahịa, ịzụ ahịa bụ nka nke ikwenye. Agbanyeghị na enwere ọtụtụ ihe na - emetụta etu esi azụ ahịa na ihe ndị ahịa na - azụ. Agbanyeghị, a na-ekpebi ihe dị ukwuu site na njiri anya, nke siri ike ma nwee nkwenye bụ agba. Mgbe ị na-ere ngwaahịa ọhụụ ọ dị oke mkpa ịtụle na ndị na-eri ngwaahịa na-etinye ọdịdị na ụcha karịa ihe ndị ọzọ dịka ụda, isi, na udidi.
Kedụ ka agba ndị ahụ si metụta nhọrọ ndị onye ọrụ na ịzụrụ?
Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị infographic site na KISSmetrics na agba na mmetụta ya na mkpebi mkpebi. Offọdụ n'ime nghọta:
Ndị ahịa na-azụ ebuli - O yikarịrị ka ị ga-emeghachi ọbara ọbara, oroma, nwa, na eze. Na-ahụ agba ndị a na nri ngwa ngwa, ụlọ ahịa ọpụpụ, na ire ere.
Ndị na-azụ ego - nwere ike iso ndị na-acha anụnụ anụnụ na teals na-emekọrịta ihe, nke a hụrụ na ụlọ akụ na nnukwu ụlọ ahịa.
Ndị Omenala - na-adọrọ mmasị na pinks, acha anụnụ anụnụ, na agba agba dị na ụlọ ahịa akwa.
Otu ihe dị mkpa dị n'ime infographic ahụ bụ na agba dị iche iche na-emetụta ọdịbendị dị iche iche!
Tags: nwaacha anụnụ anụnụaja ajaagbaCommerceecommerceọhụrụoromaịzụta omumeredeziokwu iru
Bloglọ ọrụ na-ede blọgụ: The Infographic
SMS anaghị anwụ anwụ. Nụrụ Mgbe Geo-fencing?
Sep 17, 2010 na 9: 40 AM
Nke a bụ n'ezie na-akpali!
Sep 17, 2010 na 2:35 PM
Nchọpụta a dị egwu… M na - eche maka ịre ọrịre pụrụ iche n'oge na - adịghị anya maka ndị ahịa m "na mmefu ego". Ma ugbu a, m maara ihe na agba iji!
Daalụ nwoke! Ekele m maka "Ezigbo" Manning (ị maara, onye ahụ bụ n'ezie QB!) 😉
Nov 9, 2011 na 7:01 PM
Ọ bara ezigbo uru. M na-eche echiche nke ahụ mgbe m na-ekepụta akwụkwọ akwụkwọ ụbọchị gara aga. Daalụ maka ịkekọrịta!
Nov 9, 2011 na 7:34 PM
Bet nzọ, Agba ntụ!
Nov 14, 2011 na 10:09 AM
Nov 14, 2011 na 4:59 PM
Magburu onwe post Douglas, gị inforgraphic enye oké akwụkwọ ngwá ọrụ. Enwere m mmasị na mmụọ nke agba na mmetụta ha na ahịa. Mgbe ị na-aga site na nkọwa gị banyere agba, ọ naghị esiri ike icheta ihe atụ na-akwado nke ọ bụla.